အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဒုတိယမြောက်ပြည်တွင်းထုတ် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို မကြာမီ စတင်ထိုးနှံပေးနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဒုတိယမြောက်ပြည်တွင်းထုတ် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို မကြာမီ စတင်ထိုးနှံပေးနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း » အထွေထွေ
Wed, 11/03/2021 - 11:39 -- journal_editor
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအပြင် အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ အုပ်စုကိုပါ ထိုးနှံနိုင်မည့် ZyCoV-D ကာကွယ်ဆေးသည် မျိုးဗီဇ DNA အပေါ် အခြေခံသုတေသနပြုထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အာနိသင်အပြည့်အဝရှိရန် ၃ ကြိမ် ထိုးနှံရမည်ဖြစ်သည်။ Ahmedabad မြို့ အခြေစိုက် Zydus Cadila ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အဆိုပါကာကွယ်ဆေးအား ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ စတင် ထိုးနှံ အသုံးပြုနိုင်ရန် မူလက ရည်မှန်းထားခဲ့သော်လည်း ဆေး ၃ ကြိမ်စာအတွက် ဈေးနှုန်း ရူပီး ၁၉၀၀ အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းအပေါ် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များနှင့် သဘောတူညီမှုမရရှိပဲ ကြန့်ကြာနေခဲ့သည်။
Zydus Cadila ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Sharvil Patel က ၎င်းတို့အနေဖြင့် ZyCoV-D ကာကွယ်ဆေး၏ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အိန္ဒိယ အစိုးရ၏ လိုလားချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက် များကို ရက်သတ္တ ၂ ပါတ်ခန့်အတွင်း ထုတ်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်းဖြင့် ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ နေ့၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို ကိုးကားလျက် အိန္ဒိယ PTI သတင်းဌာနက ဖော်ပြရာတွင် ZyCoV-D ကာကွယ်ဆေး ၁ ကြိမ် ထိုးနှံမှုအတွက် ဈေးနှုန်း ၂၆၅ ရူပီးသို့ လျော့ချပေးရန် Zydus Cadila က သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် PharmaJet ခေါ် ဆေးထိုးအပ်မလိုသည့် နည်းပညာသုံး အရေပြားအတွင်း ဆေးသွင်းစက်ဖြင့် အဆိုပါဆေးအား ထိုးနှံပေးရာတွင် တစ်ခါသုံး ကြားခံထိုးသွင်းပစ္စည်း (painless jet applicator) အသုံးပြုမှုစရိတ် မှာ ၉၃ ရူပီး ဖြစ်ရာ ဆေး ၁ ကြိမ်ထိုးနှံမှု စရိတ်စုစုပေါင်း ၃၅၈ ရူပီး ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Zydus Cadila သည် ZyCoV-D ၏ ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Shilpa Medicare ဆေးဝါး လုပ်ငန်းနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိကာလ၌ Zydus ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ZyCoV-D ဆေးကို ၁ လ လျှင် ဆေးထိုးနှံမှု အကြိမ်ရေ ၁၀ သန်းမှ သန်း ၂၀ စာအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း၊ အစိုးရထံသို့ ၎င်းကာကွယ်ဆေး ပေးသွင်းမည့် အပြီးသတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်မှာ အတည်ပြုထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိကာလတွင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် ရောဂါအခံရှိသည့်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသို့ ZyCoV-D ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ (NTAGI) ထံမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မူဘောင်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ထောက်ခံ ချက်များကို စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် အသက် ၁၈ နှစ်အထက် အရွယ်ရောက်သူများကို Covishield, Covaxin နှင့် Sputnik V ဆေးများ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိပြီး အစိုးရသည် ၎င်း၏ အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ်အတွက် ၁ ကြိမ်စာလျှင် Covishield ဆေးကို ၂၁၅ ရူပီးနှုန်းနှင့် Covaxin ဆေးအား ၂၂၅ ရူပီးနှုန်းဖြင့် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများထံမှ ဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့်ရှိသည့် ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော် သက်လူငယ်များကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆေးလုံးအကြိမ်ရေ သန်း ၈၀၀ မှ ၁.၂ ဘီလီယံခန့်အထိ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဒုတိယမြောက် ပြည်တွင်းထုတ် Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်သော ZyCoV-D အား အသုံးပြုပါက ဆေး ၁ ကြိမ်လျှင် ၂၈ ရက်စီခြား၍ ၃ ကြိမ် အပြည့်ထိုးနှံရမည်ဖြစ်သည်။
Source: 1. Zydus Cadila agrees to reduce its Covid vaccine price to Rs 265adose, final decision soon, 31-10-2021, Economic Times
2. Zydus Cadila to get clarity on ZyCoV-D Covid vaccine pricing in 1-2 weeks, 1-11-2021, Economic Times